ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ဇွန် ၂၂ ရက်စတင်၍ မီးပုံမှန်ပြန်ပေးမည်
21/06/2019 Thu Yay 0
ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ဇွန် ၂၂ ရက်စတင်၍ မီးပုံမှန်ပြန်ပေးမည် ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ဇွန် ၂၂ ရက်ကစပြီး အလှည့်ကျ ဝန်အားလျှော့ချတာ မလုပ်တော့ဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း….. လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမယ်လို့ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းက ကြေညာလိုက်ပါတယ်…. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ ခရိုင်နဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ ဇွန် ၂၂ ရက် စနေနေ့ကစပြီး…. အလှည့်ကျ Continuous reading
ယနေ့အထိ H1N1 ကြောင့် သေဆုံးသူ(၅)ဦးထိ ရှိလာ
ယနေ့အထိ H1N1 ကြောင့် သေဆုံးသူ(၅)ဦးထိ ရှိလာ H1N1 ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်(၄)ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်(၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၅)ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှသိရသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသီတာလှက”သေတဲ့သူတွေကလည်း အဓိကကတော့ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်ခံရောဂါ ရောဂါဆိုတာက ဆီးချိုတို့သွေးတိုးတို့ ဒီလိုရှိတဲ့သူတွေ နောက်အသက်သိပ်ငယ်လွန်းတဲ့ကလေးပေါ့။ (၆)လကလေး ၁ Continuous reading
“UAB ဘဏ်မှ အကြီးတန်းဘဏ်မန်နေဂျာ” က Customer ၏ ငွေစားရင်းမှ ငွေကျပ် သိန်း (၈၀၀၀) ကျော် အလွဲသုံးစားလုပ် ထုတ်ယူသွား
“UAB ဘဏ်မှ အကြီးတန်းဘဏ်မန်နေဂျာ” က Customer ၏ ငွေစားရင်းမှ ငွေကျပ် သိန်း (၈၀၀၀) ကျော် အလွဲသုံးစားလုပ် ထုတ်ယူသွား မန္တလေးတိုင်း ချမ်းအေး သာဇံမြို့နယ်ရှိ ဒိုင်းမွန်း ပလာဇာ UAB ဘဏ်ခွဲ တာဝန်ခံ ဖြစ်သူ အကြီးတန်း မန်နေဂျာ ဦးရန်နိုင်မျိုးဆွေသည် Continuous reading
မနက်ဖြန်မှ စ၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် မီးပြတ်တော့မည် မဟုတ်
မနက်ဖြန်မှ စ၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် မီးပြတ်တော့မည် မဟုတ် ဇွန် ၂၂ ရက်(စနေနေ့)မှ စတင်၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် လျှပ်စစ်မီး အလှည့်ကျပေးသည့်စနစ် ဖျက်သိမ်းပြီး အချိန်ပြည့် ပြန်လည်ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးမြင့်က News Watch Continuous reading
အင်္ဂလိပ်လို ၇နှစ်ပြောခဲ့ရလို့ မြန်မာစကားမပီ တော့တာပါ ဆိုတဲ့ အုပ်စိုးခန့် ။
အင်္ဂလိပ်လို ၇နှစ်ပြောခဲ့ရလို့ မြန်မာစကားမပီ တော့တာပါ ဆိုတဲ့ အုပ်စိုးခန့် ။ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သည်းသည်းလှုပ် အားပေးကြတဲ့ အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့်ကတော့ သီချင်း အေးအေးလေးတွေ ထွက်ထားပြီး ဒီသီချင်းလေးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ အောင်မြင် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ Sunday မီဒီယာနဲ့ Continuous reading
ကလေးတွေကို ဗန်းပြပြီး အလှူခံတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်ပြီး ပရဟိတဖက်ကိုပဲ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပရဟိတမင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေကိုတော့ ပရိသတ်တွေ လေးစားသလို ရင်းလည်း ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အခက်ခဲဖြစ် နေတဲ့သူတွေ မရှိတဲ့သူတွေကို အမြဲတမ်းလိုလို Continuous reading
နယူးယောက်မြို့လယ်မှာ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ရဟန်းတော်နှစ်ပါး
နယူးယောက်မြို့လယ်မှာ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ရဟန်းတော်နှစ်ပါး နယူးယောက်မြို့လယ်မှာ ရဟန်းတော်နှစ်ပါးဆွမ်းခံကြွကြတယ်။ ဆွမ်းလောင်းတဲ့ သူတွေက အသီးအရွက်စိမ်းနဲ့မုန့်ပဲသရေစာလောင်းကြတယ်။ ရ ဟန်း တော် နှစ် ပါး က လည်း ဆွမ်း ဘုန်း ချိန် နီး လေ တော့ မုန့် ပဲ သ ရေ Continuous reading
ငမိုးရိပ်တံတား (ကမာကြည် ၂) တံတားနိမ့်ဆင်းမှုဖြစ်၊ တည်ဆောက်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီအား ပြန်လည်ပြုပြင်စေမည်ဟုဆို
ငမိုးရိပ်တံတား (ကမာကြည် ၂) တံတားနိမ့်ဆင်းမှုဖြစ်၊ တည်ဆောက်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီအား ပြန်လည်ပြုပြင်စေမည်ဟုဆို ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းက စတင်ဖွင့်လှစ် အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သော သုဝဏ္ဏနှင့် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ဆက်သွယ်ထားသည့် ငမိုးရိပ်တံတား (ကမာကြည် ၂) တံတားနိမ့်ဆင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီအား ပြန်လည်တာဝန်ယူ ပြင်ဆင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် Continuous reading
ကျောင်းသား/သူ လေးတွေ အတွက် ဦးသန်းထွန်းဝင်းရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ စက်ဘီး အလှူ
ကျောင်းသား/သူ လေးတွေ အတွက် ဦးသန်းထွန်းဝင်းရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ စက်ဘီး အလှူ ၂၀ , ဇွန် , ၂၀၁၉ ကျွန်တော်တို့ ကားကြီး ၁စီး ၊ ထရက်ကား ၁ စီးနဲ့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နေ့က မိုးကြီးရွာတဲ့နေ့ ပြီးတော့ အဲ့ဒီကား ၂စီးမှာ Continuous reading